Daawo: Khudbadii xasaasiga aheyd ee Madaxweyne Farmaajo u jeediyay shacabka - Hablaha Media Network
Daawo: Khudbadii xasaasiga aheyd ee Madaxweyne Farmaajo u jeediyay shacabka
HMN:- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabaneysay ka jeediyay Garoonka Banaadir Stadium, halkaasoo kumanaan ruux ay banaan bax ay ku taageerayaan boqolka maalmood ee Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa sheegay inuu ku guuleystay fulinta balan-qaadyadii uu qaaday, isla markaana uu ka dhabeeyay sida uu yiri.
Khudbada Madaxweynaha ayuu kaga hadlay waxyaabihii uu qabsoomay, isagoo ka hadlay amniga, la dagaalanka musuq maasuqa, cadaalada, iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in amniga loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo, isla markaana shacabka iyo dowladda iska kaashadaan.
Halkan hoose ka daawo Khudbada Madaxweynaha ka jeediyay Fagaaraha